Hippo Video: Ampitomboy ny tahan'ny valin'ny varotra amin'ny fivarotana horonan-tsary | Martech Zone
Mikorontana ny inbox-ko, ekeko tanteraka. Manana fitsipika sy lahatahiry marani-tsaina aho izay mifantoka amin'ny mpanjifako ary saika ny zavatra hafa rehetra dia latsaka an-dalana raha tsy misarika ny saiko izany. Ny sasany amin'ireo toeram-pivarotana izay misongadina dia mailaka video manokana izay nalefa tamiko. Mahafinaritra ny mahita olona miresaka amiko manokana, mandinika ny toetrany, ary manazava haingana ny fahafahana ho ahy… ary azoko antoka fa mamaly matetika kokoa aho.
Tsy izaho irery… Ny fivarotana horonan-tsary dia fomba iray mivoatra ho an'ny ekipan'ny varotra mba hidirana amin'ny fanantenana miaraka amin'ny orinasa maro mahita fiakarana mihoatra ny 300% amin'ny tahan'ny valiny.
Hippo Video dia manome sehatra tsotra ho an'ny ekipan'ny varotrao mba hanorina fitokisana, hanome lanja ary hikolokolo fifandraisana amin'ny hoavy miaraka amin'ny fanampian'ny horonan-tsary REAL sy maha-olombelona. Na dia tsotra aza ny fifandraisan'ny mpampiasa azy… ampidirina ao amin'ny biraonao, ilay tena mampiavaka ny Hippo Video dia ny fampifangaroana azy ireo amin'ny fanaraha-maso ny hetsika varotra ataonao amin'ny mailaka rehetra, ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM), ary sehatra fampandehanana varotra.
Hippo Video ahafahan'ny ekipan'ny varotrao mirakitra horonan-tsary amin'ny tsindry tokana, mampiditra sy mizara ireo horonan-tsary tsy misy famadihana sehatra, ary avy eo dia manara-maso ny tahan'ny valiny mba hanamafisana ny fandrosoana sy hampandeha varotra bebe kokoa.
Video Fanovana - Omeo ny horonan-tsarinao ny fikoriana tonga lafatra nokasainao miaraka amin'ny safidy hanesorana ny fiatoana mahamenatra, hanimba zavatra tsy ilaina, hanamaivana ny fanampiny mba hitazonana fifantohana, hanova ny haben'ny endrikao, ary hameheza azy amin'ny fampidirana emojis na antso an-tariby.
Zavam-panahy mety - Amboary ny fiavianao amin'ny horonan-tsary tianao amin'ny teknolojia virtoaly virtoaly.
Video Overlay - Ampitahao amin'ny fomba mahomby ny hafatrao amin'ny fampidirana lahatsoratra sy sary amin'ny horonan-tsaryo.
GIF Embeds - Misongadina ao amin'ny boaty fidirana an'ny mpandray anao miaraka amin'ny thumbnails GIF mihetsika izay milalao rehefa manokatra ny mailakao izy ireo.
Export - Manondrana horonantsary mivantana amin'ny YouTube, G Suite ary sehatra hafa tsy misy manahirana.
Antso-To-Action - ampidiro rohy manokana hamandrihana fivoriana, na ampio bokotra Call-To-Action natao manokana handaminana demo na hiantsoana antso.
Pejy fivarotana manokana - Mitarika fitarihana avy amin'ny horonan-tsary iray mankany amin'ny tranomboky misy horonan-tsary hafa izay afaka manampy amin'ny fandrosoana ny fikarohana sy ny dian'ny mpanjifa.
Video Teleprompter – Tsy ny rehetra no afaka miteny amin'ny fomba mazava raha tsy misy drafitra… Hippo Video dia manana teleprompter naorina mba hanampy anao handeha amin'ny teboka fototra na ny pitsopitsony.
Prospect Tracking & Analytics - Araho tsara ny zava-bitanao, ny tahan'ny fiambenana antonony, ny totalin'ny lalao, ny fizarana, ny demografika, ny mpijery tsy manam-paharoa ary ny hetsika avy amin'ny horonan-tsaryo.
Integrations - Ampifandraiso amin'ny Gmail, Outlook, Salesforce, Hubspot, Outreach, SalesLoft, LinkedIn Sales Navigator, Pipedrive, ActiveCampaign, Slack, Zoom, Zapier, ary fitaovana hafa mba ho voarakitra an-tsoratra sy arahina tsara ny hetsika sy ny valinteninao.
Ankoatra ny sehatra, ny famandrihana anao amin'ny Hippo Video ahitana ny fiofanana sy paikady tena izy avy amin'i Jeffrey Gitomer.
Andramo ny Hippo Video maimaim-poana
Fampahafantarana: Mpiara-miasa amin'ny Hippo Video aho ary mampiasa rohy mifandray amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: ActiveCampaignsary mihetsika gifCRMmailakaFreshdeskfreshservicehipopotama videohubspottelefaoninaJiraNavigator mpivarotramailchimpPipedriveprospect analyticsfanaraha-maso ny ho avyFanamafisana ny varotrapejy fivarotanasalesforceSalesLoftmailaka horonantsaryvideo fanentananavideo overlayfijerena horonan-tsaryantso video varotravideo varotra coachingvideo teleprompterWordPresstoeram-piasanaYouTubezapierzendeskzohodesk